Xasilinta Iskuduwaha Xakamaynta Triac
Single Wajiga Warshadaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Nooca USB-C, Bixinta Awoodda iyo Bixinta Awoodda Barnaamijka
Qaabdhismeedka USB (Universal Serial Bus) ayaa loo adeegsanaayay heer ahaan iskuxirayaasha iyo astaamahooda laxiriira iyo awood bixinta ilaa 1996. Mudadaas waxaa jiray isbadalo badan oo lagu sameeyay qeexitaanada si loo hagaajiyo waxqabadka nidaamyada shaqaalaynaya heerarkaan. Dabayaaqadii ...
Xeedho USB (Bixinta Awooda USB)
USB-C iyo Bixinta Awood Bixinta
Waxay ku yaalliin wajiga PD Gan xeedho waa laba dekedood oo cusub: USB-C iyo USB-C Power Delivery. Midka koowaad waa uun dekedda USB-C oo ku shaqeysa iyadoo la adeegsanayo heerarkii ugu dambeeyay ee USB 3.1 ee ku kacaya illaa 3 amps. Midda labaad waxay taageertaa tiknoolajiyad xawaareyn degdeg ah oo dhaqso ah oo loo yaqaan Delivery Power. Bixinta Awoodda (PD) i ...
USB PD & Type-C Asia Display Charging Head Network waxay bilaabeen dhacdo si kor loogu qaado warshadaha lacag bixinta degdega ah, oo loo qabtay 12 kalfadhi oo isku xiga. Shantii sano ee la soo dhaafay, shirkii warshadaha ee lacag-ku-soo-celinta degdegga ah ee ay qabatay Charging Head Network wuxuu ku guuleystey ka-qaybgalka xamaasadda badan ...
Isbedelka Horumarka ee GaN USB Charger
GaN (gallium nitride) fiilooyinka korontada waxay si weyn ugu dhexjireen CES sanadka 2020 - taas oo muujineysa in sanadkaan uu arki doono xiisaha baahsan iyo korsashada kuwan yar, xawaareynta badan, iyo aaladaha tamarta ku shaqeeya. Sannad badhkii, waxaa jira caddaymo badan oo kani yahay kiiska. Pro ...
Huawei Folding Screen Shaashadda Telefoonka Gacanta Mate X2
Dhawaan, Huawei jiilkiisa cusub ee muddada dheer la sugayay ee taleefanka gacanta isku laaban ee Mate X2 ayaa ugu dambeyn si rasmi ah loo sii daayay. Taleefankan gacanta oo qiimahiisu yahay ku dhowaad 3000USD waxaa lagu qalabeeyaa 5nm processor Kirin 9000 flagship processor. Kala bixida ka dib, cabirka shaashadu wuxuu gaarayaa 8 inji Waxay qaadatay ...
Maalmaha aad lugeyneyso leben xoog badan iyo fiilooyin fara badan si aad qalabkaaga uga sii daallan tahay ayaa dhamaadka ku dhammaan kara. Saacadaha sugitaanka taleefankaaga casriga ah ama laptop-kaaga si ay kuugu soo oogaan, ama aad ula yaabto xeedho kulul oo naxdin leh, sidoo kale waxay noqon kartaa wax la soo dhaafay. Teknolojiyada GaN ayaa halkan taal waxayna ballanqaadaysaa inay ...
Si kastaba ha noqotee, arrintan u hoggaansamida waxay ku saabsan tahay inay ahaato wax la soo dhaafay iyadoo la hirgelinayo qeexida Bixinta Awooda USB. Bixinta Awoodda USB (ama PD, oo gaabin ah) waa hal heer oo lacag bixin ah oo loo isticmaali karo dhammaan qalabka USB-ga. Caadi ahaan, qalab kasta oo ay soo rogto USB wuxuu yeelan doonaa ...
Gallium Nitride waa binary III / V tooska loo yaqaan 'semiconductor semiconductor' kaas oo si fiican ugu habboon transistors-awood sare leh oo awood u leh inay ku shaqeeyaan heerkul sarreeya. Laga soo bilaabo 1990-yadii, waxaa si caadi ah loogu isticmaali jiray diode-yada iftiinka dhaliya (LED). Gallium nitride waxay bixisaa nal buluug ah oo loo isticmaalo akhris-ka-akhriska Blu-r ...